Iran: Mpamaham-bolongana Islamika Nogadraina Mitokona Tsy Hihinan-kanina Ao Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2012 14:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, polski, Ελληνικά, English
Hatramin'izay 33 taona nisian'ny Revolisiona Islamika izay, karazana paradisa ho an'ny mpitondra fivavahana Islamika i Iran, izay nahazo ny fahefana sy mitondra ny firenena. Saingy tsy izy rehetra. Mohammad Sadegh (Arash) Honarvar Shojayi, mpitondra fivavahana sady mpamaham-bolongana, no anisan'ireo iharan'ny fijaliana ao am-ponja miaraka amin'ireo voafonja maro hafa noho ny heviny sy ny zavatra nosoratany. Nataon'ny Repoblika Islamika ho demokratika ve ny famoretana? Tamin'ny volana Oktobra 2011, taorian'ny herintaona nigadrany, voaheloka higadra efa-taona an-tranomaizina, miampy fikapohana ilay mpamaham-bolongana.
Arash Honarvar Shojayi, manana kaonty Facebook, Twitter, ary bilaogy. Izy no nitsikera ny rafitra Fanaraha-maso ny Fitsarana (Vlayat Faqih), izay midika hoe fitondrana entin'ny mpitondra fivavahana, izay tazonin'i Ayatollah Ali Khamenei amin'izao fotoana izao. Voampanga ho nanao fanentanana, sy hetsika manohintohina ny filaminana anatiny izy sy ny fanalam-baraka ny fitondrana sy ny fitariham-pivavahana. Vao tsy ela akory izay no noafahana noho ny olana ara-pahasalamana izy saingy nosamborina indray taorian'ny tafatafa iray. Nitokona tsy nihinan-kanina izy nanomboka tamin'ny Alatsinainy.
Bilaogin'ny tanora mpiaro ny zon'olombelona nilaza hoe:
Anisan'ireo gadra politika ao amin'ny efitra faha-350 ao amin'ny fonjan'i Evin misy ny gadra politika i Arash Honarvar Shojayi, saingy nafindra tao amin'ny efitra faha-325, miaraka amin'ireo mpivavaka hafa izay tsy mitovy fijery aminy eo amin'ny fitsikeerana. Nampitandrina ny manampahefana fa raha mbola manohy ny fitokonany tsy hihinankanina izy, tsy mahazo mandray antso an-taroby ny olona rehetra ato amin'ity efitra ity. Natao izany fampitandremana izany mba haneren'ireo gadra hafa hanery an'i Mohammad Sadegh Honarvar Shojayi.
Tamin'ny taona 2010, namoaka lahatsoratra maromaro mikasika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tao Iran manoloana ireo mpitarika fivavahana Shiita i Mohamad Sadegh Honarvar Shojayi. Nitatitra ny vaovao notontosain'ny Amnesty International tamin'ny 1998 momba an'i Iran ilay mpamaham-bolongana:
Hatramin'ny nametrahana ny Repoblika Islamika tao Iran tamin'ny taona 1979, nitohy foana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Anisan'ny iharan'izany izay mety ho mpanohitra hatramin'ny hery ankavia ka hatramin'ny monarsista [mpandala ny fitondram-panjaka], ary ao koa ny foko sy ny mpivavaka vitsy an'isa. Eo ihany koa ny karazam-pandrarana atao amin'ny mpitarika fivavahana manohitra ny fototra iorenan'ny rafi-politika Iraniana toy ny velayat-e faqih.
Ao amin'ny Repoblika Islamika, na dia mpitondra fivavahana aza dia maro ireo tsy mankasitraka ny fitondrana.